I-Cancer - Capricorn Polarity
Unqulo & Umoya Iimpawu zeZodiac
I-Cancer neCapricorn zichasene nevili leZodiac , zibenza zibini ukuba zicinge. Bazongena kwiipalo zengqondo kunye neengqiqo zehlabathi, kunye namaziko aphantsi komhlaba.
I-Cancer kunye neCapricorn yi- polarity , ngoko kukho i-resonance eqhelekileyo, kunye nolwazi oluchasene naloo mqondiso.
Ukuba unamandla amaninzi kwenye yezi zibonakaliso ezimbini ze-Zodiac, elinye icala lingabonakala lingekho kubunzulu bakho (okanye ububanzi).
Njengam, ndiyiCancer, kwaye ndifumanisa iimpawu zeCapricorn ngokungahambisani nendawo yam.
Nangona kunjalo, ndiyabona indlela ukuhlakulela ngayo, kwindlela yam inyanga, kwenza ndive ndikhulule. Nangona ndimele ndivume, iCapricorn iyona nto inzima kum, kwaye ukuhlala kwimfihlelo yayo ihambelana ngoku nge-Pluto's transit (ukuya ku-2024). I-Pluto yiplanethi yokufikelela kwinyaniso yinyani eyinyani, kwaye iyayityhila. Ngoko ndiyibona i- Pluto eCapricorn njengethuba eliza kuvela.
Ekubeni, sithetha ngeCapricorn ibe yi-go-getter, ukunyuka kwinqanaba lezentlalo okanye lenkampani njenge-totem yayo yesimanje, ibhokhwe yeentaba. Nangona kunjalo, kwisidalwa esisisigxina , i- Seagoat , i-totem yaseKapricorn endala, sibona ukudibanisa kwalo mqondiso wehlabathi kumanzi anzulu.
Le nthiti ebonisa i-Cancer, kunye nemvelaphi yayo ye-ocean kunye nendawo ejulile, kunye nebhokhwe ekhwela yeKapricorn.
Ukunyuka phezulu kwaye uthathe isitayela somhla kaCapricorn, kufuneka ukwazi apho ukhona khona, kwaye indawo yeCarcer yindawo yokumangalisa yexesha elidlulileyo.
Ukuthetha ngolwandle olutyebileyo, umdlavuza unomqondiso wokufuna i-harbor ekhuselekileyo, okanye ukubeka i-anchore olwandle olunxweme (lwe-psyche). I-Cancer ifuna ikhaya, kwaye inokuziva ngathi ithinjwa, kwaye isoloko inomdla wokuhlala ekhaya.
I-looney Moon-- Croled Cancer ifumana amandla ayo xa iqulunqa igobolondo eqinile yokukhusela, kuyo yonke into ephikisayo ngaphakathi. Izipho ze Crab zivela kwindlela engqondweni yazo, kufuneka ikhuseleke ekubeni ingadlulelwa ngaphandle ngaphandle kokukhathazeka kwangaphandle.
I-Cancer idinga indawo edibeneyo, ukwazi umbala wayo wokwenyani kunye nobukhulu. Yaye ukuba ibe ne-self-contained, imida engqongqo engaqhubiyo yonke indawo. Kwaye ukusuka kwicala likaCapricorn, sinokufuna ukukhusela nokubandlulula inkampani esiyigcinayo. Ukusuka kuloo ndawo enokuzithemba, umdlavuza unako ukuphuma ehlabathini, kwaye uzive uqobo, njengoko uzisa ubunzulu bokuba ngaphakathi okanye ukuthetha.
Ukuzama iCapricorn kudinga umthombo onobubele obunamandla, ngaphandle kokuba uPer Gullfoss ubhala kwiNkwenkwezi Yokomoya, uyazibuyisa kuye, "ubanjwe ebumnyameni obungaphakathi kunye namagumbi azaliswe ngumntu."
Amanqaku aseGullfoss "Amandla kaCapricorn kufuneka ahambe kwimiba yomibini ngexesha elifanayo. Njengamasebe atyula esibhakabhakeni, iingcambu ziyangena emhlabathini." Kwaye kamva, ubhala esithi, "Kukwazi ukuhlala phezulu kwinqanaba elixhomekeke kwinqanaba elinikela kunzulu kwintlambo enika ulwazi olucebileyo kunye nolwaneliseko yiCapricorn."
Oku kukukhumbuza kwakhona, iingcambu zomthi omkhulu, njenge-Oak Oak, ezifana nezikhulu njengamagatsha, kodwa ngaphantsi komhlaba. Bafumana ukutya okuvela kumanzini angaphantsi komhlaba, njengokuba sifuna loo nto yokutya, ukuba sizive sikhuselekile.
KuCapricorn, sifumana uphawu oluqaphela ixesha, kwaye loo nto iyimfihlelo yayo. Yintoni enokubuyiswa apha kukuhlakanipha kokudala abantu kule ndege, ngezinto ezingaphezulu kweeons. Kwaye isisiseko sokuthi siqhubeka nookhokho bethu, kunye nabo bazayo emva kwethu.
IGazi kunye nomhlaba
Ngomdlavuza kunye neCapricorn, ubuhlobo bexinzelelo lwegazi buhlangene, kodwa ngaziphi iindlela?
Ndifumene ingcaciso ecacileyo kwinqaku evela kwiSher Institute of Astrology kunye neMetaphysics, kwiCancer: "Ukuxhamla kwegazi lokuqala kwegazi kunye ne-DNA kummangalisa iimfihlo zabo."
NgeCapricorn, kuba ngumthwalo okanye ukuphendula kwintsapho eyongezelelweyo.
I-Capricorn, kwinqaku le-Sher Institute: "Ihlabathi liphela yintsapho yakhe." Ukhumbula iimfihlelo zobomi kunye nokufa wayemxela ngegazi lomlingo wesidalwa sowesifazane, nangona athatha intsingiselo encinane ngoku. kunye nemvakalelo yindlela esele ihlambulukileyo yamhlaba, kwaye umhlaba unokuba ngumniki wethu wobomi kodwa naye uyasusa.
Ekubeni sathuthuka kunye noMhlaba ngokwawo kwimimandla ethile, sibona indlela iKapricorn (kunye nePlut transit) idalula amandla okuba nefa, isithethe kunye nomoya wendawo. Kubonakala ngathi sisendleleni, apho sinokubuyisela khona ingcambu, njengenye indlela yokuba singenasiphelo.
I-Capricorn ke, kunye noSaturn njengombusi wayo, uyazi ukuba imida eqinile igcina inqaku elikhethekileyo eliye laguqukela ngokwenyama. Kukuqatshelwa ukuba ngumgcini welifa leenkozi, kunye nelifa lehla.
Oku ngakumbi kwiCancer - Capricorn Polarity
I-Cancer yiyona nto yokuqala yohlobo , ngelixa iCapricorn isetyenziselwa iHlabathi - zombini iindawo zeSolstice.
I-Cancer nguMama, ngoxa iKapricorn yiCrossone okanye umdala. I-Cancer ilungiselela ukuzala, kwaye inika indawo yokukhusela. UCapricorn uhlala kunye ne-specter yokufa, kwaye uyazi ukuba "Ubusika buza," kwaye uyilungiselela.
I-cancer iye yafaniswa nothando olunjengomntwana, okanye uthando olungenamthetho, ngelixa uthando lukaCapricorn luneemeko nezilindele. Iintsholongwane zifikelela kubantu abasengozini, kwaye ziwela kwimikhuba yokuxhomekeka kwabo. I-Capricorn ngumfundisi wokwaneliseka, kunye nemizekelo.
Amanye amabini e-Cancer-Capricorn awela ekusebenzeni indima yomzali nomntwana. Yaye ukubona ubulumko bobabini inxalenye yale polarity, ..
I-Mercury kwiCapricorn: Kuthetha ukuthini?
Izibonakaliso eziphakamayo: Leo
I-Teen Libra - Uphawu lweZodiac
Umhlaza weCrab kwi-Zodiac
I-Dark Side yeSagittarius
I-Side Side ye-Virgo
Izipho ezintathu zobuMhlophe ze-Leo
Iprogram yePluto In Astrology
I-Mars kwi-Scorpio: Ukuchaza iMpawu
5 Iimeko Ezibangelwa Imithi Yokufa
Yintoni iBrit Yitzchak?
IiFilimu zeCoccer Hooliganism
IWegesi yeGciwane leZinyama
I-AP ye-Biology Exam Information
Indlela yokukhetha imibala yokuPenda kwe-Pastel
I-Teen Teen - Zodiac Signs
Amashadi, amaGridi kunye neeGrafu
Iimifanekiso ze-Disney ze-Animated Classic zezingane ze-1930 nee-1940
Izifundo eziphezulu ze-Massive Open Online (MOOCs)
Iindlela ezi-5 zokugubha inyanga ye-LGBT Pride
Ngaba Yonke Imifula iphuma kuMzantsi?
Isifundo seKrisimesi Iingqongo
Funda nge-Essere yesenzi ngesiTaliyane
Imfazwe Yehlabathi II: Avro Lancaster